मध्यम बर्गिय परिवारका लागि गुणस्तरिय शिक्षा दिन एजेज लागि रहेको छः प्रिन्सिपल धिताल | KTM Khabar
मध्यम बर्गिय परिवारका लागि गुणस्तरिय शिक्षा दिन एजेज लागि रहेको छः प्रिन्सिपल धिताल
२०७४ बैशाख १ गते ०९:२३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती भएसंगै विद्यालयहरुले विद्यार्थी केन्द्रित गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी हुने गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुगि रहेका हुन्छन् भने विद्यार्थीहरु पनि कुन स्कुल पढ्ने ?, कसरी स्कुल छान्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रि भई रहेका हुन्छन ।
सोही कुराको जानकारी प्रदान गर्नका लागि केटिएम खबरले विभिन्न शैक्षिक संस्थाको जानकारी दिने हेतुका साथ विभिन्न स्कुलका प्रिन्सिपलहरुसंग स्कुल विशेष भिडियो सम्वादहरुलाई जोड्दै आईरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले बौद्ध, पिपलबोटमा रहेको एजेज ग्रेडेड इंग्लिस सेकेण्डरी स्कुलका फाउण्डर/प्रिन्सिपल गणेश धितालसंग विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ शैक्षिक सत्रमा तयारीमा जुटि रहँदा यति बेला सरको व्यस्तता, कार्यतालिका कस्तो छ ?
अहिले एजेजको विषयमा भन्दा नयाँ शैक्षिक सत्र २०७४ को एकेडेमीक क्यालेण्डर बनाउँने कामहरु सकिसकेका छौँ । त्यस पछी हामीलाई सधै माया गर्ने प्यारेन्सहरुसंग जुन हाम्रो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन दु्रत गतिमा अगाडी बढि सकेका छौँ । २२ गतेबाट परिक्षा पनि सम्पन्न गरि सकेका छौँ । २६ भित्र नै रिजल्ट पब्लिस गरेर हामी नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारीका लागि अगाडी बढ्दै छौँ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा हाम्रो एकेडेमीक क्यालेण्डरमा विभिन्न विद्यार्थीहरुको शैक्षिक लगायत विभिन्न इसिय गतिविधिहरुलाई गत बर्षको भन्दा अति नै विशिष्ट तरिकाले पस्किने कोशिस गरेका छौँ । त्यसले विद्यार्थीहरुको चौतर्फि विकासमा महत्वपुर्ण टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ ।
२०७३ सालको समिक्षा गर्दा एजेजको हकमा कस्तो रह्यो ?
हुनत हामी २०६१ सालबाट सुरु भएका हौँ । ०७३ सालसम्म आई पुग्दासम्म हामी नर्सरी देखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने हैसियतमा यस क्षेत्रमा उपस्थित भईसकेका छौँ ।
हामी लगभग स्कुल लेभलमा ४०० विद्यार्थी होल्ड गरिरहेका छौँ । ११, १२ को कक्षाहरुमा २०७ जना विद्यार्थीहरु होल्ड गरेर राखि रहेका छौँ । त्यस हिसाले हेर्दा हाम्रो शैक्षिक यात्रा सकारात्मक तरिकाबाट अगाडी बढाइ रहेका छौँ र ०७३ सालमा पनि हाम्रो अभिभावकहरुले सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु मन पराई दिनु भयो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अभिभावकहरुको समस्याहरु समाधान गर्ने र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने, गुणस्तरिय शिक्षा दिने भन्ने नै हाम्रो मुल लक्ष्य थियो र त्यस अनुसार काम गरिरहेका छौँ । अभिभावहरुबाट अहिलेसम्म नकारात्मक कुराहरु सुन्नु परेको छैन । हामीलाई जति अभिभावकहरुले माया गर्नु भएको छ उहाँहरु खुशि हुनु हुन्छ । हाम्रा विद्यार्थीहरु खुशि छन र हाम्रो विद्यार्थीहरुले यो विभिन्न परिक्षाहरुमा हासिल गरेका शैक्षिक उपलब्धिहरु पनि राम्रा छन । त्यो पनि उल्लेखनिय नै रहेको पाईन्छ ।
एजेज कस्तो विद्यालय हो ?, कहिलेबाट सुरु गर्नु भयो ?
एजेज गे्रडेड २०६१ सालमा स्थापना भएको स्कुल हो, मैले अघि पनि भने । हामीले यो स्कुल खोल्नुको मुल उद्देश्य भनेको नेपालमा रहेको मध्यम बर्गिय परिवारलाई फोकस गरेर सर्वसुलभ मुल्यमा गुणस्तरिय शिक्षा दिने हाम्रो मुल उद्देश्य हो । त्यो अुरुप नि हामीले आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । सकेसम्म अभिभावकलाई गाह्रो नहोस भनेर शुल्कको विषयमा हामीले सकेसम्म कम लिएर गुणस्तरिय शिक्षा दिन लागि परेका छौँ । त्यसमा हाम्रा अभिभावकहरु पनि खुशि हुनुहुन्छ ।
हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो भने एजेजमा नर्सरी पढि सके पछी मास्टर्स डिग्रि पढोस । अन्त भौतारियर हिड्न नपरोप भन्ने नै मुल लक्ष्य रहेको छ । यसको लागि हामीले विभिन्न प्रोगामहरुलाई अगाडी बढाउँदै छौँ । जस्तै भनौ रेस्टोरेटिभ प्राक्टिस अन्तर्गत भनेको प्यारेन्स अनी विद्यार्थी र स्कुल मिलेर त्रिपक्षिय रुपमा हामी काम गर्छौ । यो प्राय गरी युरोपमा प्राक्टिस गरेको पाइन्छ ।
त्यस पछी हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरका लागि हामीले स्कुल भित्र जुन एउटा एकेडेमीक टिम हुनु पर्ने हो । एउटा छरितो र एक दम हाईली क्वालिफाइट हुनु पर्ने हो । त्यो एजेजमा रहेको छ । जस्तैः ३,४ जना विदेशी युनिभर्सिटीबाट डिग्रि होल्डर गरेर आएको टिम मसंग छ । हामीसंग रहेका साथीहरु पिएचडी होल्डर हुदैँ हुनुहुन्छ । राम्रो र उच्च जनशक्ति मसंग छ । त्यो जनशक्तिले एजेजले बौद्ध क्षेत्रमा रहेका मध्यम बर्गिय परिवार छन । त्यसमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सम्पुर्ण जनसमुदायमा आश्वसता पार्न चाहन्छु ।
गणेश धितासंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः